Microstation CONNECT Edition - Tsy maintsy mifanaraka amin'ny interface vaovao isika - Geofumadas
Novambra, 2016 Microstation-Bentley, Pirinty voalohany
Ao amin'ny fanontana CONNECT an'ny Microstation, natomboka tamin'ny 2015 ary nifarana tamin'ny 2016, ny Microstation dia manova ny fampifanarahana menio mahazatra azy amin'ny alàlan'ny bira fisakafoana ambony toa an'ny Microsoft Office. Fantatray fa ity fiovana ity dia mitondra ny vokany avy amin'ilay mpampiasa izay nahalala hoe aiza no ahitana ny bokotra, toy ny nanjo an'ireo mpampiasa AutoCAD tamin'ny taona 2009, na dia araka ny hita aza ny zava-niseho tamin'ny fampisehoana, raha misy zavatra nifoka sigara an'i Bentley Ny rafitra dia ny paikadiny mampiditra tsikelikely ny fanovana ary maharitra mandritra ny fotoana maharitra.
Tsaroantsika ny tranga fisie DGN izay zara raha nisy fiovana telo tao anatin'ny 36 taona. Intergraph's IGDS 16-bit voalohany nanomboka tamin'ny 1980 ka hatramin'ny DGN V7 1987 dia niseho, ny DGN V32 izay nampiharina tamin'ny 8 rehefa lasa 2001-bit, izay efa nandritra ny 64 taona.
Amin'ny ambaran'ny fiovana ankapobe (tsy hiditra amin'ny antsipiriany momba ny taona 35) Sehatra fihetsika dia eo ho eo isam-pito taona, dia mety hahatsiaro avy Microstation 95, Microstation V8 in 2001, Microstation V8i in 2008 ary ankehitriny dia Microstation mifandray fanontana ny hanomboka amin'ny 2015 ary tafiditra tanteraka ho amin'izany 2016 araka ny Efa nasehon'izy ireo tamin'ny fihaonana tany Londres.
Fa hitako izao te-hijery ny hanova interface tsara, izay efa nandao ahy somary gaga tamin'ny voalohany; na fiovana V8i mba Connect maro, excelling fampifanarahana ny samy hafa-dalana, Geo-Engineering ao anatin'ny foto-drafitr'asa BIM, nifantoka ny vokatra telo lehibe: Design (Microstation), Management (ProjectWise) sy Fiainana (AssetWise) ary indrindra ny famelana ny famolavolana modely eo ambanin'ny concept of Software as Service.
Ny akaiky akaiky an'i Bentley miaraka amin'i Microsoft
Microsoft dia mety tsy mpamorona an'io fifandraisana io amin'ny Ribbon, na dia ampifandraisin'ny olona hoe "Microsoft Office 2010 style" ary noho izany dia nanjary nalaza tamin'ny ambaratonga fa maro ireo fitaovana ankehitriny no manana ny fomban'izy ireo miasa amin'izany fomba izany. Ka ny fanakaikezan'i Microsoft an'i Bentley tato ho ato dia hisy fiantraikany kely. Saingy ny zava-misy hitako an'i Microsoft miaraka amin'ny rahona fototra, ny HoloLens, ny fisehoana tampony ary ny fampisehoana fihetseham-po nataony tao amin'ny Fihaonambe Fotodrafitrasa nanomboka tamin'ny taon-dasa, tamin'ny fahitako ny geofumary mpiray tsikombakomba, rehefa namoaka ampahibemaso i Bentley tamin'ny taona lasa, Microsoft dia maniry bebe kokoa noho ny fivarotana fahazoan-dàlana ProjectWise amin'ny rahona Azure. Toy izao no fiasany, na dia miaraka amin'ny mistika an'ny CEO iray izay nieritreritra tsara aza mba tsy ho faty ny nofinofin'ny fiainany; ary izany dia voaporofo amin'ny fahitana an'i Trimble, Topcon ary Siemens misy fifamatorana mifameno izay mihoatra ny fomba nentim-paharazana.
Inona no tombony amin'ny Riban'ny Microstation
Raha ny marina dia nanohitra foana ny Bentley manana interface toa ny fomban'ny hafa, ka ny menio mitsangana alohan'ny V8 dia lasa menio sisiny ao amin'ny V8i, miaraka amina fotodrafitrasa maro kokoa hidirana amin'ireo fitaovana miorina amin'ny sehatr'asa. Saingy sarotra foana ny nitady bokotra ho an'ireo vao teraka, noho izany ny Top Ribon misy lohahevitra dia fanovana azo raisina, raha jerena fa tsy miova ny lojika amin'ny fikandrana tokana manaraka ny fikorianan'ny baiko. Amin'ny farany, ity fomba fanao amin'ny menio ity dia efa malaza loatra ka farafaharatsiny tsy mila miverina nianatra ireo mpampiasa farafaharatsiny.
Zava-dehibe ihany koa ny zava-miafina maro amin'ireo safidin'ny sehatr'asa no nafenina tao, ankehitriny izy ireo dia azo zahana amin'ny fomba sariaka kokoa amin'ny menio fanombohana. Ary farany, zava-dehibe ny manombana fa ny menus dia tsy ho mahazatra intsony ny sehatra ka manoloana ny fiovan'ny haben'ny efijery nandritra ny fotoana lava dia olana izy ireo.
Noho izany, ny zavatra azontsika etsy ambony dia ny fisintonana amin'ny asa aman-draharaha, Quick access toolbar, ny tabilao Ribon, ary ny boaty fikarohana izay mavitrika amin'ny F4, ny tsara indrindra ny manadino ny fanalahidy.
Angamba izany dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa tena betsaka amin'ny fitaovana any ivelany any. Farafaharatsiny ho hitako fa nomen'izy ireo fampiasa maro hafa ny menio "Explorer", izay zavatra maro toy ny fomban'ny tsipika, lahatsoratra, refy ary zavatra nohajaina hatrizay, fa, amin'ny kaonty rehetra, dia mitohy tsy raharahaina. Nampihatra zavatra tena ilaina tokoa izy ireo, toy ny fanamorana ny famoronana rohy eo anelanelan'ny takelaka sarintany (layouts) miaraka amina drag sy drop tsotra, izay tsy vitan'ny zavatra anatiny ao amin'ilay sary ihany fa miaraka amin'ny fisie ivelany toy ny sary na antontan-taratasin'ny birao (teny, excel sy powerpoint).
Mahaliana fa rehefa mikirakira takelaka dia nanisy safidy izy ireo amin'ny famoronana tabilao mavitrika amin'ny drafitra rehetra tafiditra ao anatin'ilay tetik'asa, afaka apetraka ho toy ny drafitra index misy hyperlinks amin'ireo fijery rehetra ireo, index index na index concept. . Toy izany koa, mampidira latabatra amin'ny dl, excel na csv mifandraika amin'ireo zavatra ao anaty sary, ao anatin'izany ny halavany na ny faritra mba hampidirina ao anaty famaritana ny sanganasa sy ny tetibola. Hitako foana io tsy manampy io, fa mety hanova ny saiko aho izao fa azo atao ny mifandray amin'ireo tetikasa amin'ny alàlan'ny Bentley Cloud Services.
Ho an'ireo mpampiasa matihanina dia misy foana ny safidy hananganana ny sakafo misidina eo amin'ny zoron'ireo menus; Ankoatr'izany dia misy tricks ho an'ny fantsom-bokatra sy ny fanamafisana ny asa.
Nampidirina tao amin'ny browser ihany koa izy io, fampiasa bebe kokoa amin'ireo toetra antsoina hoe "entana", izay ahafahana misoratra anarana toy ny "tsanganana", "beam" "rod 1 / 4", sns. amin'ny zavatra rehetra amin'ny karazana voafaritra na ny toetrany geometrika.
Ary rehefa vita amin'ny Office io, amin'ny safidy "fisie", dia azonao atao ny mahita ireo fiasa mahazatra amin'ny fanokafana, ny fitehirizana, ny fandefasana sns. Fa koa ny fidirana amin'ny fananana amin'ny sehatr'asa izay tsy fantatry ny manam-pahaizana manokana fotsiny ny fomba hahitana azy; miaraka amin'ny safidy fitantanana maro hafa toa ny fanendrena ireo fihetsika sy fiovana.
Rehefa nosokafana ny programa dia miseho ny interface misy ohatra, fampianarana video sy rohy mankany amin'ny vaovao. Azonao atao ny manokatra ireo rakitra santionany eto, na manokatra rakitra manokana; Toy izany koa, rehefa nakatona ny fisie fiasana dia azo averina ilay interface. … Fa taiza no nahitako an'ity tamin'ny interface mainty? XD.
Ity pejy fandraisana ity dia mifandray amin'ny mpizara fiofanana Bentley Learn izay mampiseho ny haavon'ny traikefa, safidy lehibe hianarana; Ankoatra izany, ny fifandraisana amin'ny RSS dia ahafahan'i Bentley mitazona ireo mpampiasa azy hatrany amin'ny fanambarana ofisialy, ary amin'ny farany, ny fidirana amin'ny kaontin'ny tambajotra sosialy sy ny Bentley Communities.
Ireo izay mahalala ny teny hoe Benchmarking sy ireo fitaovana hafa eo amin'ny tsena dia hahita fa tsy manova tanteraka izany fanovana izany. Na izany aza, tsy maintsy ekeko aho fa misy ny zavatra ataon'i Bentley mba hahazoana antoka fa mahatsapa haingana be ilay lampihazo, mandany kely kokoa ny fahatsiarovana ary ... na dia nanakiana mafy aza aho Ribbon an'ny AutoCAD 2009, Tsy maintsy miaiky aho fa ny mikrosta amin'izao fotoana izao dia mijery hafahafa.
Previous Post«Previous Torohevitra amin'ny fampiharana ny LADM
Next Post Torotoroy ny teny miafina ny VBA macro Microstationmanaraka »